သစ္စာတရား (3 viewing) (3) Guests UsernameAndPassword ရယူရန်မင်္ဂလာပါ ဓမ္မမိတ်ဆွေများခင်ဗျား...
User Register ပေးထားလျင် Spam user များ နေ့စဉ် ဝင်ရောက်သောကြောင့် User Register ကို Disable ပေးထားရပါသည်ခင်ဗျား။ သို့သော်လည်း ဖိုရမ်သို့ ဝင်ရောက်ဆွေးနွေးမည့် ဓမ္မမိတ်ဆွေများသည် အောက်ပါမဲလ်ကို ဆက်သွယ်၍ username ပေးပြီး Password တောင်းခံနိုင်ပါသည်ခင်ဗျား။
Username နှင့် Email ရသည်နှင့် မဲလ်ပြန်ပြီး Password ပေးပို့ပေးပါမည်။
ဝင်ရောက်ဆွေးနွေးပေးကြသည့် ဓမ္မမိတ်ဆွေများကို အထူးကျေးဇူးတင်ရှိပါသည်ခင်ဗျား...
ဆက်သွယ်ရန် Email - winmyint817@gmail.com
Replies Last Post There are no forums in this category! ဘာသာ၊သာသနာ Forum
Replies Last Post ဝိပဿနာလုပ်ငန်းခွင် ဆွေးနွေးပွဲ
ဝိပဿနာလုပ်ငန်းခွင်ကို ဝင်ရောက်လာကြသော မိတ်ဆွေများ၏ အတွေ့အကြုံများနှင့် ဆက်စပ်၍ ဆွေးနွေးမှုပြုကာ တစ်ဦးကိုတစ်ဦး ကျေးဇူးပြုခွင့်ရကြစေရန် ရည်ရွယ်၍ ဤကဏ္ဍလေးကို ပြုလုပ်လိုက်ပါသည်ခင်ဗျား... 11
26 Re:မိုးကုတ်တရား ပတ္တမြားအမြုတေ အဆီအနှစ်များ by Tun | 02/08/2010 11:25 ဓမ္မဒါနအဖြာဖြာ
တရားဓမ္မများမျှဝေဖို့ လေးစားရိုသေစွာဖြင့် ဖိတ်ခေါ်ပါတယ်ခင်ဗျား... 19
4 ပုံတော်ဘုရား မှ ဂုဏ်တော်ပွားရန် by နိုင်လင်း | 11/01/2011 12:18 တရားဓမ္မဆွေးနွေးရာအဖြာဖြာ
တရားဓမ္မများဆွေးနွေးဖို့ ရိုသေလေးစားစွာဖြင့် ဖိတ်ခေါ်ပါတယ်ခင်ဗျား... 11
34 Re:ဥာဏ်စဉ်တရား by THI HA | 05/17/2011 17:01 ရေးသားမျှဝေ အသိကြွယ်
ရေးသူ၊ ဖတ်သူ အကျိုးတူကျေးဇူးပြုရင်းဖြင့် အသိပညာရင့်သန်စေဖို့ ရည်ရွယ်ပါတယ်ခင်ဗျား... 14
7 ဘဝ ပရိယာယ် by နိုင်လင်း | 10/31/2011 13:40 သတင်းတိုထွာအဖြာဖြာ
အလှူကိစ္စသတင်းများမှအစပြု၍ အစစအရာရာသတင်းများ မျှဝေသတိပေးကြဖို့ ရိုသေလေးစားစွာဖြင့် ဖိတ်ခေါ်ပါတယ်ခင်ဗျား... 12
1 July-13 Sitagu sayardaw bayargyi Dhamma Live! by admin | 07/04/2009 13:41 ကဗျာများ
စာကဗျာ အလင်္ကာလေးတွေဖြင့် အသိမြှင့်ကြပါစို့... 5
3 သံဝေဂကဗျာ by ကံကောင်းသူ | 03/08/2010 20:15 Recent Posts
ပုံတော်ဘုရား မှ ဂုဏ်တော်ပွားရန်Guestဓမ္မဒါနအဖြာဖြာTuesday, 01 November 2011889
ဘဝ ပရိယာယ်Guestရေးသားမျှဝေ အသိကြွယ်Monday, 31 October 20111010
Re:ဥာဏ်စဉ်တရားGuestတရားဓမ္မဆွေးနွေးရာအဖြာဖြာTuesday, 17 May 20111711
Re:ပြုစုပျိုးထောင်ပေးပါGuestတရားဓမ္မဆွေးနွေးရာအဖြာဖြာFriday, 06 May 20111984
ဘာဝနာကထာ (၁၁)Guestရေးသားမျှဝေ အသိကြွယ်Tuesday, 21 September 20109562 TopicAuthorCategoriesDateHits
သစ်ပင်ပေါ်မှာ လမ်းလျှောက်သူGuestရေးသားမျှဝေ အသိကြွယ်Tuesday, 14 September 2010836
ဘာဝနာကထာ(၂၆)Guestရေးသားမျှဝေ အသိကြွယ်Monday, 06 September 2010869
Re:ဒေါသကိုဘယ်လိုပယ်မလဲwinmyintတရားဓမ္မဆွေးနွေးရာအဖြာဖြာSunday, 02 May 20105666
Re:ကို PKZ နှင့် ဆွေးနွေးမှုGuestတရားဓမ္မဆွေးနွေးရာအဖြာဖြာFriday, 30 April 20108792
သံဝေဂကဗျာGuestကဗျာများMonday, 08 March 20102078 သစ္စာတရား Forum Stats
Total Users: 1 Latest Member: winmyint Total Messages: 149 Total Subjects: 74 Total Sections:2Total Categories: 7
Guests Board Categories UsernameAndPassword ရယူရန်ဘာသာ၊သာသနာ... ဝိပဿနာလုပ်ငန်းခွင် ဆွေးနွေးပွဲ... ဓမ္မဒါနအဖြာဖြာ... တရားဓမ္မဆွေးနွေးရာအဖြာဖြာ... ရေးသားမျှဝေ အသိကြွယ်... သတင်းတိုထွာအဖြာဖြာ... ကဗျာများ - New Posts